Umvambo kwiqatha lomfazi, indawo eguqukayo kakhulu | Ukuzoba
Umvambo kwiqatha lomfazi, indawo ebhetyebhetye kakhulu
Nat Cerezo | | Iitattoo zeqatha
Un tattoo I-anklet yabasetyhini ijongeka intle kwabo (kunye nabo) bafuna uyilo oluncinci. Indawo, ukongeza, ibhetyebhetye ngakumbi kunokuba kubonakala ngathi uqala ukuyibona.
Ngaba uyafuna ukwazi okungakumbi malunga noyilo olunamathele kule ndawo? Qhubeka ufunda kwaye uza kubona!
1 Umphezulu weqatha
2 Iqatha uqobo
3 Inxalenye esezantsi yeqatha
I tattoo ye-anklet yabasetyhini inokuba nkulu kunokuba sicingaKe indawo ayifanelanga ukuthatha uluvo loyilo olukhulu entlokweni yakho.
Ngale nto, indawo ephezulu yeqatha ilungile, apho sele iqala khona ukulinganisa umlenze, apho sinokukhetha uyilo olufana nezityalo, amanqaku, iileta, imida ... Ezi tattoos zimi nkqo zikhangeleka zintle kule ndawo, kuba imilo yemilenze iyababeka.
Nangona kungacetyiswanga ukuba ubhale ithambo leqatha ngokwalo (iitatto kwiindawo ezinesikhumba esibhityileyo kwaye sisondele ethanjeni, ukongeza ekubeni kubuhlungu, akuhlali xesha lide, kuba ulusu lunengxaki yokufunxa inki) le ndawo inokwenzeka. Ngokunokwenzeka indawo apho kufuneka ubungakanani obuncinci. Zilungile, umzekelo, izinto ezihamba ngokuthe tye ngaphezulu nje kwendawo yeqatha ezinje ngeentsimbi, iintaba, imida ...
Inxalenye esezantsi yeqatha
Okokugqibela, kumvambo weqatha lomntu obhinqileyo emazantsi eqatyana, eyona nto ikhangeleka intle ziyilo ethe tyaba. Kwinxalenye, iqatha liqala ukujika libe lunyawo, liyenza ilungele uyilo olufana neentyatyambo, iinkwenkwezi, inyanga, iintaba ... Nantoni na enamathela kwimilo ethe tyaba egubungela lo mmandla kwaye, ubukhulu becala, iqala phantsi unyawo.
Siyathemba ukuba sikunike imibono ye tattoo yabasetyhini bakho. Sitshele ukuba unayo nayiphi na izimvo!
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ukuzoba » Iitattoos zivuliwe » Iitattoo zeqatha » Umvambo kwiqatha lomfazi, indawo ebhetyebhetye kakhulu
Iitattoos eziphindwe kabini, iisimboli eziyimfihlakalo
Iintyatyambo ze-Mandala, ubuhle be-hypnotic kulusu lwakho